‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ मा दयाहाङ र कर्माको अपोजिटमा उपासना
काठमाडौँ । ‘कबड्डी’ को तेस्रो सिरिज ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ मा लागि अन्तिम समयमा कर्माको इन्ट्री भएको छ । लामो समयदेखि फिल्ममा अभिनेता प्रदीप खड्काको प्रवेश हुने भएपनि यो चर्चित फिल्मको तेस्रो सिरिजमा दयाहाङ राईसँग कर्माले अभिनय गर्ने भएका हुन् । आफूलाई ‘स्टार’ बनाएको ‘प्रेमगीत’ को तेस्रो सिरिजमा व्यस्त हुने भएपछि प्रदिपले ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ बाट बाहिरिएको चर्चा रहेको छ ।
यस फिल्मको सोमवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच औपचारिक निर्माण घोषणा गरिएको थियो । यस वर्षको तिज वा दशैंको बीचमा जुनसुकै मितिमा प्रदर्शनमा आउने बताइएको फिल्मलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्नेछन् । यो फिल्मको अघिल्ला दुई सिरिज पनि उनैले निर्देशन गरेका थिए । निर्देशक गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाको कथामा फिल्म बन्न लागेको हो ।
सो फिल्ममा अभिनेता अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘क्याप्टेन’ बाट सुखद डेब्यू गरेकी अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरीको लिड रोल रहनेछ ।
उनी आफू ‘कबड्डी’ सिरिजको सदस्य बन्न पाउँदा भाग्यमानी महशुस गरेको बताउँछिन् । यस फिल्म अघिल्ला दुई सिरिजमा पनि प्रमुख भूमिकामा रहेका अभिनेता दयाहाङले फिल्मलाई उत्कृष्ट बनाउन आफ्नो टिमले इमान्दार प्रयास गर्ने बताए ।
फिल्ममा दयाहाङ, कर्मा र उपासनाका अलावा रिश्मा गुरुङ, माओत्से गुरुङ, पुस्कर गुरुङ, कविता आले, विल्सन विक्रम राई, लुनिभा तुलाधर, विजय बराल, बुद्धि तामाङ, कमलमणी नेपाल, अरुणा कार्कीलगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहनेछ ।
जेठ ५ गतेबाट छायांकन सुरु हुने ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ का एक्टिङ कोच अनुप बराल हुन् । निमेश श्रेष्ठले फिल्म सम्पादन गर्नेछन् ।
यस फिल्मको निर्मातामा मणीराम पोखरेल, अर्जुन कार्की, ओमचन्द्र रौनियार छन् । भने, रुदेना साडा लेप्चा सह-निर्माताको रुपमा छन् । यसमा रोहित शाक्यको पाश्र्व संगीत रहनेछ । फिल्ममा सुलभ पहारी, याम भण्डारी, किरण लिम्बु सहायक निर्देशक र सिजन दाहाल, क्रिस लामा मुख्य सहायक निर्देशकको रुपमा छन् । कला निर्देशकमा सुरेश कार्की र मधुसुदन कार्की छन् ।
काठमाडौँ । डा. सिके राउतको जीवनीमाथि नेपाली फिल्म निर्माण हुने भएको छ । ‘डा. सिके राउत’ नाम जुराइएको फिल्मको बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच औपचारिक निर्माण घोषणासँगै निर्माण टिमले टीजर
शिल्पालाई पतिको आग्रह – 'छबिको अदालतमा सिधै आउनुस् न्याय पाउनुहुन्छ'
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली सिनेमा क्षेत्रममा भेट्रान फिल्म निर्माता र उनकी पत्नी शिल्प पोखरेलको झगडाले तातिएको छ । श्रीमान् श्रीमतीको झगडा एक कान दुइ कान मैदान हुदै प्रहरी देखि मिडियासम्म
चलचित्र विकास बोर्डले भन्यो - अभिनेता खनालको फोटो नियोजित रुपमा खिचियो
काठमाडौं । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा शुक्रबार राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान वितरण कार्यक्रमको फोटो विवादबारे चलचित्र विकास बोर्डले एक विज्ञप्ति निकाल्दै खण्डन गरेको छ । अभिनेता सरोज खनालले
विवादरहित बनेन राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार
काठमाडौँ । गत शुक्रबार सरकारले तीन बर्षदेखि (०७३, ०७४ र ०७५) देखिको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान’ अवार्ड तथा सम्मान एकसाथ प्रदान गरिएको छ । विगत तीन